ဣထိယခေါ် ကြေးမုံဂျီးသည် Lady | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဣထိယခေါ် ကြေးမုံဂျီးသည် Lady
ဣထိယခေါ် ကြေးမုံဂျီးသည် Lady
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Apr 7, 2014 in Aha! Jokes, Satire |9comments
ဟေ့.. လျှာဂျီးကို အစော်ဂါးနဲ့ကွ… ရွာထိပ်မှ ကကြောင်ကြီး အော်ဟစ်နေသံဖြစ်သည်။ ကြေးမုံဂျီးရယ် စဉ်းစဉ်း စားစားလည်း လုပ်ပါကွာ။ မင်းအတွက်ငါ့ဘွ တခုလုံး ပေးဆပ်ခဲ့တာဒွေ ရှင့်ဂိုဝ မုန်းဒယ်ဆိုဒဲ့ စဂါးတခွန်းထဲနဲ့ ပီးလိုက်ရမှာလား။ မင်းအတွက် ခဏတာ ရေဗွက်လေး.. ကိုယ့်တွက် ဘွတသက်စာဗာမေ… အဲဒီသီချင်းစာသား ငါ့အတွက် နမိတ်များ ဖြစ်နေဂဲ့ရော့ သလားကွယ်။ အို.. ကျမဒါဒွေ အသိဗူး.. ရှင် သွားမလား မသွားဗူးလား… အော်လိုက်မှာနော်.. “ဟောသည်မှာ.. ပဲဗြုတ်စ်…။” ရှေ့စာလုံးက ကြေးမုံဂျီး အော်သံဖြစ်ပီး နောက်စာလုံးမှာ ကကြောင်၏ သံယောင်လိုက်သံ ဖြစ်သည်။
ကြေးမုံဂျီး အစဂဒေါ့ ကြောင်ကြီးမှ ကြောင်ကြီး.. ငါးပိဆိုလျင် ဖုတ်ပီးသား၊ ပေါက်စီဆိုလျင် အချဉ်ရေတွဲလျက်.. ကြေးအိုး ငုံးဥပါမပါ မေးစရာ မလို.. အဲလောက်ထိ ရိုသေသည်။ ဒီလောက် ပြောင်းလဲသွားမည်ဟု မထင်ရေးချ မထင်..။ ပြောင်းလည်း တရုတ် ပစ္စည်းတွေလို ဒီတံဆိပ်မှ ဟိုတံဆိပ်ပြောင်းတပ် ယုံလောက်သာ ထင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုက ခြစ်တတ်သော ကြောင်ကြီး၏ မဟာအမှား..။ လူဆိုသည်က ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေလိုက်၍ ပြောင်းဓာတ်သော သတ္တဝါ.. ကာလံဒေသံဟူ၍ တရားဟော ရှိသည်မဟုတ်လော။ ခုဒေါ့ နောက်ကျသွားလဗျီ..။
မှုန်ဂျီးကိုယုန်ရွေ့ တဂိုလုံးပုံအပ်ပီးဗျီမို့ ဘွတခု တည်ဆောက်ရန် ဖိတ်စာတောင် ဝေထားပီဗျီ။ မင်ဂါဆောင်ဂို ပြည်ပမှာ ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်အဆင့် လုပ်ချင်ဒယ် ဆိုသည်မို့ သင်္ဘောကက်ပတိန် သဂျီးဖောက ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘော မြန်တျန့်ရေပိုင်နက် မဝင်ခင် ပင်လယ်ပြင်တွင် မင်ဂါပွဲ ကျင်းပရန် ကူညီမည်။ သင်္ဘောသီးဂျီးတလုံး လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူ အမ်တီသဲဆိုလျင် ရနောင်းဖက်မှ သင်္ဘောပေါ်တက်ရန် ပတ်စ်ပို့ပင် လုပ်ပြီးသွားဗျီ၊ အာတီဒုံက ဗန်ကောက်ကနေ လာရောက် ချီးမြှင့်မည်။ အစားအသောက် အတွက်လည်း ပူစရာမလို၊ ဒူဘိုင်းမှ မောင်ရှုံးလူဂ ကေအက်ဖ်စီ ကြက်ကြော်ပုံးလိုက် ပို့ပေးမည်။ ကဲ ဘာလိုသေးလဲ.. အားလုံး စီစဉ်ထားပီးကာမှ အပျက်ပျက်နှင့် နှာခေါင်း မီးတောက်ခွင့် လွတ်တော့မည်။
ထင်ဒေါ့ အထင်သား.. ဘွားဒေါ်ဂျီး ဝမ်ပေါင်ကြေးနီတောင် ကိစ္စမှာ ဘုမသိဘမသိဝင် တရားအားထုတ်ပီးထဲက ဒင်းဂြိုလ်ကြွနေသည်။ မနက်ပိုင်းနေ့စဉ် မုန့်ဟင်းခါး စားရာမှ ဆန်ပြုတ်နှင့် အီကြာကွေး ပြောင်းသောက်သည်။ တသက်လုံး စားလာသည့် ငါးပိရည်ကိုပင် တရုတ်နံနံပင်လေး ထည့်လိုက်ရမှ ဖြစ်လာသည်။ မိုးစက်ဝိုင် ကိစ္စတုံး ကလည်း သူနှင့် စကားများရသေးသည်။ ဘာရယ်မဟုတ် ကြောင်ကြီးပါးစပ်မှ ရှမ်းတရုတ်မလေး တယ်လှသဂိုး ပြောမိဒါဂို တရုတ်ရှမ်းမ တပြားသားမှ မလျော့..။ သူအော်ချက် ထုတ်သည်နှင့်ပင် တဒိုင်းတဗျီလုံး ဆူညံပွက် သွားသည်။ ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါး ဘာဖြစ်သွားမည်ကို နဲနည်းလေးမှ မစဉ်းစား.. တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီသဖွယ် အာဏာရှင် ဆန်လွန်းလှသည်။ ကားကြတော့ အမေရိကန်လုပ် ဖို့ဒ်ဖိုးဝှီးဒရိုက်ဗ်မှ.. ဟန်းဖုန်းဆို ယူအက်စ်မိတ် အိုင်ဖုန်းကမချ..။ ပြောလိုက်လျင် ဝဒို့ပြေဂျီးဂလေ ဝဒို့ပြေဂျီးဂလေ.. ဒါဆို ဟာဝှေးဘရင်းန် လက်ကိုင်ဖုံးကိုင် မလား ဗြောင်မေးတော့.. ဒါမျိုး အိမ်မက်ထဲတောင် ထည့်မမက်တဲ့..။
ထားဗာဒေါ့ ထားဗာဒေါ့.. ဒါတွေ သိလျက်နှင့် ခြစ်နေသည်ကဗင် ကကြောင်ကြီးရဲ့ အပြစ်… ခုဒေါ့ နှောင်းခဲ့ပီ.. ပြောင်းဂဲ့ဗီ..။ အဲသလို ဖြေရင်းနှစ်သိမ့်ရင်း ဆုံးရှုံးရဒေါ့မည်ဆိုဒေါ့ ရင်ထဲ ဗလောင်ဆူပွက်လာသည်။ ဆိတ်ရိုင်း ဆိတ်မိုက်များ ဝင်လာသည်.. ပဲ..အဲ…ဟဲ..။ ဂလောက်တောင်ဖြစ်တာ ထောင့်အပြင် တန်းအရှိဗူး.. လာဇမ်းကွာ ငါ့နောက်လိုက်ခဲ့.. ကြေးမုံဂျီးအား အတင်းဆွဲ ခေါ်သွားသည်.. မှောင်ထဲဂို..။ အိုး.. ရှင်နော်.. ခွေးကျင့်ခွေးကြံ မကြံနဲ့.. လွှတ်လွှတ်။ ဟားဟား ဝုတ်ဝုတ်.. ဝူးအူး။ ဒီလိုဆိုဒေါ့လည်း ကျားငစဉ်းလဲဂျီး ခံတွင်းမှ ရွှေသမင်လေး သနားစရာ..။
ခြုံကွယ် တနေရာအရောက်တွင် ရုတ်တရက်လှည့်ဂါ ဟောဒီမှာ ကြည့်ဇမ်း..။ အိုး.. ကြေးမုံဂျီး အလန့်တညက် ယောင်ရမ်း မျက်စိပိတ်လိုက်မိသည်။ အငိုက်မိ သွားသဂိုး.. ပြီးမှ မျက်နှာအုပ်ထားသော လက်ချောင်းဂျားထဲမှ ခိုးကြည့်ရင် ရှင်နော်ရှင် အယုတ်မာနဲ့..။ အောင်မာ.. ယုတ်မာဒါ ဘယ်သူလဲ.. မင်းတို့ တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ ငါ့တဘို့ ကောင်းစားရေး စီးပွားရေးသောင်းဂျန်းလို့ ဒုက္ခရောက်ရဒဲ့ မြန်တျန့်ပြည်သူဒွေ.. ကြည့်လိုက်စမ်း..။ ဟုတ်ပေသည်.. ချုံကွယ်အလွန် မြေကွက်လပ်တွင် မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံဃိန်း၊ ဝမ်ပေါင်စီမံကိမ်း၊ ရွှေဂက်စ် စီမံဂိန်းတို့ကြောင့် မြေယာဆုံးရှုံးရသည့် ဒေသခံလယ်သမားများပုံတူ ပန်းချီပန်းပုများ ခင်းကျင်းပြသထားသည်။ မဟုတ်တရုတ် ကြေးမုံဂျီးအား မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်စေလို၍ ခေါ်လာခဲ့ဂျင်း ဖြစ်သည်။
ပြောအုံးလကွာ.. ဒါဒွေ မဟုတ်ပါဗူးလို့.. ငြင်းလကွာ.. ဝ အသိဗာပူးလို့..။ ဒီမယ်ကြေးမုံဂျီး.. မင်းဂို ခြစ်ခဲ့တာ နိုင်ငံရေး အပါဗူး၊ စီးပွားရေး အပါဗူး.. ငါ့ရဲ့ ပင်ကိုယ် သဘာဝ တခုဒဲနဲ့ မျက်စေ့စုံမိတ် ခြစ်ခဲ့တာကွ။ ဒါကိုမင်းဂ နာသလေး ဘာလေးနဲ့၊ ဟေ့ဒီမှာ.. နာစရာရှိ လွမ်းဒါနဲ့ ဖြေရဒယ်။ မြန်တျန့်ပြည်အတွက် ငါဘယ်လောက်ပဲ ဆိတ်နာနာ.. ေဩာ် အခုနေ.. တရုတ်တန်းက ကြေးအိုး သောက်လိုက်ရရင်၊ ဘဲကင်တီးလိုက်ရရင်၊ ဝက်သား တုတ်ထိုး ကြာဇံကြော်နဲ့ ဆွဲလိုက်ရရင်၊ မနက်စောစော ခေါက်ဆွဲကြော် ပဲပြား ဘဲဥနဲ့ ဝက်သား ကစ်လိုက်ရရင် လို့တွေးပီး နာဒါဂို လွမ်းဒါနဲ့ဖြေဒယ်။ မင်းအလှည့်ကြတော့ ငါ့လိုဆိတ် တဝက်တောင် မထားနိုင်ဗာလားကွ.. ဟေ….။
အမယ်လေး သာမီမှားဗာပီ ကိုကိုကြောင်ကြီးရှင့်.. အမိုက်အမဲလေးဂို ဗွေမယူဗာနဲ့.. မသိလို့ စော်ဂါးဂဲ့မိဒါဗာ။ နောင်ဆို ကိုကိုကြောင်ကြီးစဂါး နာခံပါ့မယ်။ ထားရာနေ စေရာသွား.. ငါးပိဆို ထောင်းပီးသား.. ကြက်သွန်ဆို လှီးပီးသား ဖြစ်စေရပါ့မယ်။ ခုပဲ ဈေးသွားပီး ဝက်ကလီစာနဲ့ ဘဲပေါင်းဟင်း ချက်ကျွေးပါ့မယ်။ တရုတ်ကူမြူနစ် ပါတီနဲ့လည်း အဆက်အသွယ် ဖြတ်ပါ့မယ်။ မြန်တျန့်ပြည်ဖက်ကလည်း ထောက်ခံပေးပါ့မယ်..။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အလိုမရှိ၊ ဝမ်ပေါင်စီမံကိန်း ချက်ခြင်းရပ်.. ရွှေဂက်စ်ပိုက်လိုင်း ပြန်ထွက်သွား.. အဲလိုအဲလို အော်ပါဒယ်ရှဉ့်..။ ဖြစ်ပြန်တော့လဲ ချက်ခြင်း.. သူ့လောက် ကြွတက်သူမရှိ.. အင်း ခက်ကချေပီ..။ အဆုံးမဒေါ့ အပြောင်းအလဲ မြန်လွန်းလှသူ တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီးအားကြည့်ဂါ….။
ပေါင်းလည်းခက်၏.. သံဝေဂလင်္ကာလေးရွတ်ရင်း… ကျနော်ဗာများ တတ်နိုင်ဦးပါမြည်နီး….။
။။။။။။ မာန်လည်ဆရာတော် ဘုရားကြီးအား ဤစာစုဖြင့် ဦးညွှတ်ပူဇော်ပါ၏။။။။။။။။။
ဒက်ဒီကြောင် က မိန်းမလိုချင်နေပြီ။
မရတော့ ဟို ကုတ် ဒီ ကုတ် ၊ ဒီ ကြောင် လိုက်ကုတ်နေရှာတာ။
ဖင်ဘက်ကနေ ရိုက်ရမှာ. . .
အထင်ခံရလဲ နဲဘူး ဆိုပီး ကြိုးဇားပန်းဇား ရေးရှာတာ
နောက်ဆုံးမတော့လည်း ကြေးမုံကြီးခမျာ ကြောင်ကြီးလက်ထဲကရေလို သွန်လိုသွန် မှောက်လိုမှောက် ခံရချေပါတကားးးးး
ရီလိုက်ရတာ ပုံလေးကတော့ သနားဇယာ
ကြေးမုံကြီးက ဣထိယ မှ ဟုတ်ရဲ့လား အမောင်ကြောင်ရယ်။